ရုရှားနိုင်ငံရှိ ယခုနှစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီး၏ လက်မှတ်ကို အနိုင်ရယူရန် အခွင့်အရေးနောက်တစ်ခု!
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖောက်သည်များအကြား အထူးရေပန်းစားနေပါပြီ။
ဒါကြောင့် သင်တို့ကို အချိန်ပိုပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါပြီ! အတော်ဆုံးကုန်သည် ၅၅ဦးအတွက် နောက်ထပ်လက်မှတ် ၅၅စောင်!
ပထမပွဲစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူများလဲ ထပ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးရောင်းဝယ်ပြီး ရုရှားသွားမည့်လေယာဉ်ပေါ်မှာ သင့်ကိုယ်သင်ရှာဖွေပါ! ပျော်ရွှင်ဖွယ်အခွင့်ထူးများ၊ ဝမ်းသာတဲ့မျက်နှာများ၊ ကွင်းထဲက ကျော်ကြားတဲ့ ကစားသမားများ... ဒါတွေအားလုံး သင့်ထံမှာဖြစ်လာနိုင်ပါပြီ!
သင့်အောင်မြင်မှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်အောင် တချိန်တည်းမှာပဲ ပြိုင်ပွဲအားလုံးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။ သင်အဲ့ဒီကိုရောက်နိုင်ပါပြီ!